Infographic: Pfupi Nhoroondo yeSocial Media Kushambadzira | Martech Zone
Muvhuro, Ndira 1, 2018 China, August 12, 2021 Douglas Karr
Nepo mazhinji enhau enhau achitsvaga simba nekusvika kwe organic evanhu vezvenhau Marketing, ichiri network iyo yakaoma kuti iwanikwe pasina kusimudzira. Zvemagariro enhau kushambadza musika wanga usipo makore gumi chete apfuura asi wakaburitsa $ 11 bhiriyoni mumari muna 2017. Izvi zvaikwira kubva kungori $ 6.1 bhiriyoni muna 2013.
Zvekushambadzira zvemagariro zvinopa mukana wekuvaka ruzivo, tarisiro inoenderana nenzvimbo, huwandu hwevanhu, uye maitiro ehunhu. Zvakare, mazhinji eshambadziro anogona kuiswa nemamiriro ezvinhu padhuze nemusoro wakakodzera. Mazhinji emapuratifomu anopawo ekutaurisa mikana yevashanyi vakasiya yako saiti kana yekutengera ngoro vakadzokera kunzanga.
Handina kugara ndiri fan of social media advertising, zvakadaro. Kusazeza kwangu neasocial media kushambadzira ndicho chinangwa chemushandisi wemagariro. Kana ivo vari munzvimbo dzakanangana nemagariro uko kufarira kuri kwakafanana neshambadziro, inogona kuburitsa mimwe mibairo mikuru. Nekudaro, kana chinangwa chemushandisi chiri chekuenda kunoshanyira mhuri neshamwari uye iwe uchiramba uchimhanyisa zvisina kushambadzira zviripo pakati… haugone kuwana mhedzisiro yaunoda kutsigira iri kuenderera mushandirapamwe.
Chimwe chinhu chakakosha cheshambadziro yemagariro enhau ndechekuona kuti zvinongedzo zvako zvakamakwa nemhando yedanidziro. Sezvo vazhinji vevashandisi venhau vanoshandisa maapp, vazhinji veavo vashanyi vanogona kuratidza sekushanya kwakananga mune yako analytics chikuva sezvo maapplication asinga siya kureva masosi sezvo chinongedzo chadzvanywa uye bhurawuza richivhura rwoga.
Yakabatana yakagadzira iyi infographic kuratidza kufambira mberi kwe magariro kushambadzira mapuratifomu. Yakabatana ndeye yekupedzisira-kumagumo mhinduro yeinotungamirwa nedata, chaiyo-nguva yekudyidzana feed feed, uye programmatic kushambadzira kune ese makuru masocial network mune imwechete chikuva.
Tags: emarketerFacebookfacebook ad marifacebook as apifacebook mobile adsfacebook inotsigirwa nyayamativi mana akaenzanaLinkedInlinkedin ad marilinkedin ads apisocial ad marikushambadzira munharaundasocial advertising advertisingevanhu vezvenhausocial media advertisingchigumbusotumblrTwittertwitter ad maritwitter ads ads apitwitter ads ads api partnertwitter nharembozha kushambadziraYahooYouTube
Dec 23, 2016 pa 7: 01 AM
Mhoro ndatenda kune inonakidza infographic. Ini pachangu ndakatanga online mu1998 nzira pamberi peSocial media yakambofungwa uye zvino tarisa kukura! kwave kupenga kukwira 🙂 ndatenda
Aug 13, 2021 na1:00 PM
Nice infographic uye kubva muna 2021 nhamba dzinoisa nhamba yevanhu vari kushandisa social media inomira pa3.95 bhiriyoni izvo zvinoshamisa. Zvinotaridza senge social media iripo kuti igare kune ramangwana rinoonekwa.